မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: 2012 So So Dramas - (Drama I watched till the end)
ကိုရီးယား စီးရီးတွေ ကြည့်လေ့မရှိပေမယ့် ခုတလော စိတ်တအားရှုပ် လေးလံနေလို့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး တစ်ခုခုကို စွဲလန်းချင်နေတာနဲ့ အတော်ပဲ.. ဒီကားတွေ အခွေရှာဝယ်ပြီး ကြည့်လိုက်ဦးမယ်.. ကျေးဇူး ချစ်မ ! ♥
5/02/2013 5:37 PM
ကို၇ီးကားတွေမှာ မဗေဒါ၇ဲ့ ဝေဖန်ေ၇းတွေကို ကြိုက်တယ်။
Alice ကားမှာဆို မဗေဒါရဲ့ ဝေဖန်ရေးကိုဖတ်ပြီး သဘောကျလို့:) .... ဒီကားစပြထဲကကြည့်ထားတာ ကြည့်ပြီးပြီးသွားတာပဲ ခေါင်းထဲဘာမှသိပ်မကျန်ခဲ့ဘူး ခုမှစဉ်းစားကြည့်မိတယ် ကြည့်တာချင်းတူပေးမယ့် တွေးတတ်တာချင်းမတူဘူး ဒီလိုတွေးတတ်လို့ လဲ စာတွေကောင်းကောင်းရေးနိုင်နေတာဖြစ်မယ် နောက်ပိုစ့်တွေမျော်နေမယ် ကျေးဇူး
Rooftop ကိုတော့ ရီရလွန်းလို့ ကြိုက်တယ် အထူးသဖြင့် မင်းသားနဲ့ ကိုယ်ရံတော်လုပ်တဲ့ကိုယ်လူချော သုံးယောက် ကိုသဘောအကျဆုံး အဲလိုကားမျိုး နောက်ထပ်မျော်နေတယ် ဇာတ်လမ်းကို ခုပြန်စဉ်းစားတော့ ရောနေပြီး ကိုရီးယားကားတွေကြည့်တာများလို့ လားမသိဘူး Queen Inya and Rooftop ဇာတ်လမ်းနောက်ခံက နည်းနည်းဆင်နေသလားလို့ 
5/02/2013 5:57 PM
မကြည့်ရသေးတဲ့ကားဆိုရင်တောင် အစ်မရေးထားတာတွေကြည့်ပြီးပြန်ကြည့်ချင်စိတ်ဖြစ်တယ် Rooftop princeက အစပိုင်းတော့ရီရတယ် ဒုတိယတွဲ ထွက်စေချင်တယ် ဒါပေမဲ့ အလယ်ပိုင်းက အီလည်လည်ကြီး သိပ်ယုတ္တိမရှိသလို ခံစားရတယ်
5/02/2013 6:52 PM
5/02/2013 7:52 PM
Alice in the wonderland - Hate the Actress
Rooftop Prince - Hate the Actor
Big - Hate both actor and actress (But still love see Suzy)
5/02/2013 9:42 PM
ဖတ်လို့အရမ်းကိုကောင်းပါတယ် မဗေဒါက အပင်ပန်းခံပြီး စိတ်ပါလက်ပါရေးတတ်လွန်းလို့ ဇာတ်ကားကြည့်ရတာထက်တောင် review ဖတ်ရတာပိုကြိုက်တယ် တကယ် ..
ပြီးတော့ kpop အကြောင်းတွေလဲ ရေးတင်ပေးပါဦး ခုတလော Exo ကြည့်တာများပြီး Chonyeol ဆိုတဲ့ကောင်လေးကို အိပ်မက်တောင်မက်တယ် ချစ်စရာလေးမို့ ဟီးဟီး သူတို့အဖွဲ့အကြောင်း ရေးတင်ပေးပါဦး
5/02/2013 11:32 PM
မဗေဒါရဲ့ဘလော့ကိုပုံမှန်ဖတ်ဖြစ်ပါတယ် ။ ကိုးရီးယားကားတွေမကြည့်ဖြစ်ပေမယ့် ဇာတ်လမ်း review တွေကိုတော့အားပေးတုန်းပဲ ၊ JGS ကိုကြိုက်တာချင်းကလည်းတူတော့..ဟိ..။ JGS ကို you are beautiful လိုကားမျိူးထွက်စေချင်လိုက်တာနော်..။ အားပေးနေတယ်နော် ချစ်မ ။
CA မှာ အတွေးချင်းတော်တော်တူတယ်။ ဒီအသိုင်းအဝိုင်းထဲ ရောက်ဖို့ကြိုးစားရပုံတွေ၊ HSK က သူ့သူငယ်ချင်းကို ဖုန်းဆက် ပြောတဲ့အခန်းတွေ သဘောကျတယ်။ မင်းသားက မှန်းထားသလို perfect ဖြစ်မနေပဲ ချမ်းသာအောင်မြင်ရုပ်ချောပေမယ့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အားနည်းနေတာတွေ သဘောကျတယ်။
How about Nice Guy, my dear?
I thought u really liked it :)
5/05/2013 2:39 PM
Hi sis, I guess You haven't check out my previous post which is "Best Dramas in 2012 list"... check out ..
5/06/2013 4:02 PM
One of my fav drama is Cheongdam-dong Alice. start from this drama i become crazy for Park Shi Hoo :P
ကြည့်စရာမရှိလို့ Cheongdam-dong Alice ကြည့်နေတယ်
Thanks , sis, I read it. And I'm really appreciated ur review :)
5/16/2013 9:56 AM
Kpop နဲ့ အဆက်ပြတ်နေတာ တော်တော်ကြာပြီ... ဘယ်သူတွေအသစ်ထွက်လဲတောင် မသိတော့ဘူး... Exo ကို မြန်မာအသံထွက်တွေထည့်ထားတဲ့ သီချင်းကလွဲပြီး တခြားသီချင်းတွေမသိဝူး... မင်းသားတွေကို ကြိုက်လွန်းလို့ အိပ်မက်မက်တာကတော့ မဗေဒါနဲ့ တူသွားပြီ.... အဲလိုအိပ်မက်မျိုးဆို နိုးသွားရင်တောင် ပြန်အိပ်ပြီး မရမက ပြန်တွေးပြီး ဆက်မက်တယ်... အဟိ....
Review တွေဖတ်ရတာ ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ ရေးရတာ အားရှိတာပေါ့.... နောက်လဲအားပေးပါအုံးနော်... :D